Maanta iyo Itobiya: Shacabka Tigreega oo Hubka loo Qaybiyay. | ogaden24
Qowmiyada tigrayga ayaa kujirta diyaargarowgii ugu danbeeyay waxaana Dhamaan shacabka tigrayga loo qaybiyay hubka noocyadiisa kala duwan.
Waxayna xadka udhaxeeya Maamulka Amxarada iyo canfarta kaqodan hayaan dhufayso dhaadheer xadka kuteedsan.
Dhanka gobolka Amxarada waxaa maanta magalada goondhar lagaliyay xaalad dag dag ah ujeedka Kadanbeeya xaalada dag daga ah ayaa in dadka Tigray ah ama tigrayga taabacsan ee gobolkaas kunool laxasuuqo gobolkana laga sifeeyo, Balse qowmiyada Tigrayga ayaa arinkaas siwayn ula socota waxana suuragal ah in xadka labada qowmiyadood dagaal kaqarxo.
Xagaas iyo adisababa
Qowmiyada Amxarada ayaa bilowday inay dadka amxarada ah ee goondhar, Bahardar iyo guud ahaanba Itoobiya kunool basas kusoo guraan unasoo daabulan magalada Adis Ababa si ay tirakoobka magalada adis ababa kadhacaya ugu guulaystaam.
Waxaana magalada adis ababa lagu dhax arkay Amxaro Teendhooyin kadhaxdhisatay oo leh Réer Adis ababa ayaan nahay ee guryo iyo dib udajin ayaan ubaahanahay.
Duqa magaalada Addis Ababa ayaa arinkaas kahadlay wuuxan sheegay inaan waxaas layska yeelaynin adis ababana dadka daga layaqaan waxana durba cirka isku shareeray xiisada udhaxaysa oramada iyo amxarada.
Dhanka Somalida ayaa iyaga juuq iyo jaaqaba laga layahay waana dadka halista ugu badan haysato ee khayraadkooda iyo dhulkoodaba laboobayo.